ချင်းပြည်နယ်၏ ပထမဆုံးသော ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို ဟားခါးမြို့၌ တည်ဆောက်မည် - Yangon Media Group
ဟားခါး၊ မေ ၁ဝ
ချင်းပြည်နယ်၏ ပထမဆုံးဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတစ်ရုံကို ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နယ် ဘုံဇုံရွာတွင် စတင်တည်ဆောက်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မေ ၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးနှင့်ချင်း ပြည်နယ်အစိုးရတို့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင် နေခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက် ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက်မှာ ဖြစ်သလို ဘိလပ်မြေသယ်ယူထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ရထားဘူတာရုံတစ်ခုကိုလည်း တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကို (Suyvey) လုပ်ငန်းတွေလည်းပြီးသွားပါပြီ။ ဘယ်ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာက တော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်က ညှိနှိုင်းနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ချင်း ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဆလိုင်းလျန် လွယ်က မေ ၉ ရက်တွင် ပြော ကြားသည်။
ယခု ချင်းပြည်နယ်တွင် တည် ဆောက်အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းပါးပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီမှု ရှိ၊ မရှိ အချိန်ယူစိစစ်ခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မည့် စက်ရုံအနေအထားကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လာရောက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရှင်များလည်း လာရောက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်မှုများရှိရာ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် သက်တမ်းရှည်ကြာစွာ အောင်မြင်မှုရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ နေရပ်ပြန်လာသူများကို စစ်ကိုင်းတိုင်း စည်ပင်သာယာရေးဝန်ြ??
စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဈေးနှုန်းကွာဟမှုကို အချက်အလက် ခိုင်မာစွာဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ??
ရှာရွန်စတုန်း၏ နေရာ အစားထိုး သရုပ်ဆောင်မည့် ဒယ်မီမိုး